Ny fandehanana mafy hatrany aloha hatreto no tena anton’ny loza saingy tsy azo lavina ihany koa ny tsy fahaizana ny lalàn’ny fifamoivozana. Raha ny tokony ho izy dia tokony hisy fahazoan-dalana mitondra amin’ireny moto scooter rehetra ireny. Fomba fanao ratsy hatrany hatramin’izay ihany koa ny fanovana ny faktiora ataon’ny tompona moto. Manomboka amin’ny tanjaka 50cc mantsy dia takiana ny fahazoan-dalana mitondra. Rehefa mividy moto scooter anefa ny maro an’isa dia miteny amin’ny mpivarotra ny amin’ny hanovana ny faktiora ho 49cc hatrany hialana amin’ny fitakiana fahazoan-dalana. Misy hatrany amin’ny 100 sy 125 cc mihitsy anefa ireny moto kely ireny saingy ovaina hatrany ho 49cc hany ka mitera-doza avy eo. Manampy trotraka ny tsy fahaizana mifehy ny lalàn’ny fifamoivozana tahaka ny fisongonana an-kavanana sy ny fitsofotsofoana efa mahazatra ny mpitondra moto scooter.